(Unicode) ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီခေါင်းဆောင် သူရဦးရွှေမန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယ်သာလန်သံအမတ်ကြီး H.E Mr Wouter Jurgens အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့၊…
(Unicode) ဖာပွန် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ၏ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖာပွန်မြို့နယ်ရုံးအား ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီအချိန်တွင် ဖာပွန်မြို့ ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ကရင်ပြည်နယ်တာဝန်ခံ…
(Unicode) ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီခေါင်းဆောင် သူရဦးရွှေမန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr CHEN Hai အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့၊…
(Unicode) ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီခေါင်းဆောင် သူရဦးရွှေမန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Christian Lechervy အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့၊…
လူဟာ လူပါပဲ (၅) သူရဦးရွှေမန်းနှင့် ဦးလှဝင်း(လေသူရဲတစ်ဦး)
လူဟာ လူပါပဲ (၅) သူရဦးရွှေမန်းနှင့် ဦးလှဝင်း(လေသူရဲတစ်ဦး) (ယခင်အပတ်မှအဆက်) လေတွင် ပျံသွားချင်သလား “ပါတီအတွင်းက ခေါင်းဆောင်တချို့ ကိုရွှေမန်းကို သဘောထားကွဲစေခဲ့တဲ့ အခြား အကြောင်းအချက်တွေ ကျန်သေးလား”…
ဖေ‌ဖော်ဝါရီလ (၂၂) ရက်‌ နေ့ (၁၁:၀၀) အချိန်တွင် တနင်္သာရီဒေသကြီး၊ မြိတ်ခရိုင် တနင်္သာရီမြို့နယ်၊ သရဘွင်ကျေးရွာ ဦးထွန်းကြိုင်+ဒေါ်သန်းအေး နေအိမ်၌ရုံးဖွင့်ပွဲကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ရပ်မိရပ်ဖ (၃) ဦးကဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး…
သူရဦးရွှေမန်း NDI ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
(Unicode) နေပြည်တော် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီခေါင်းဆောင် သူရဦးရွှေမန်းသည် အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက် National Democratic Institute (NDI) အဖွဲ့၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အကြီးတန်းဌာနေညွှန်ကြားရေးမှူး Kenza…
လူဟာ လူပါပဲ – ၄ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် ဦးလှဝင်း (လေသူရဲတစ်ဦး)
ယခင်အပတ်မှအဆက် လူဟာ လူပါပဲ – ၄ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် ဦးလှဝင်း (လေသူရဲတစ်ဦး) ဒီစေတနာမှ ဒီဝေဒနာ ​ကျွန်တော် အသေအချာ ပြန်တွေးကြည့်တယ်။ ​ဒီနေ့က ၂၀၁၉…
လူဟာ လူပါပဲ – ၃ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် ဦးလှဝင်း (လေသူရဲတစ်ဦး)
ယခင်အပတ်မှအဆက် လူဟာ လူပါပဲ – ၃ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် ဦးလှဝင်း (လေသူရဲတစ်ဦး) ကိုကို ဘာကြောင့် မုန်းတာလဲ “အဲဒီအချိန်မှာ ကိုရွှေမန်းဆီ ဘယ်သူမှ ဖုန်းမဆက်ဘူးလား။…